Kudliwe ezikanokusho kwaMpisane | IOL Isolezwe
Isolezwe / 7 February 2013, 10:27am / INTATHELI YESOLEZWE
ISHAQIWE i-Rolls Royce yakwaMpisane izlo ngesikhathi ihtimba elidla impahla ligasela emzini wakulo mndeni ose-la Lucia eThekwini batapa impahla yenani elilinganiselwa ku-R50 million.
UMNUZ Sbu Mpisane nomkakhe uShauwn sebezakhele udumo eThekwini ngojkuphila impilo ephezulu nokuhamba ngezimoto zemali eshisiwe. Enye impahla yabo idliwe izolo kuhlanganisa nezimoto ezingu-62. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
LENA ngenye yezimoto ezidliwe emzini kaMpisane eLa Lucia izolo.
NALESI sithabathaba somuzi kaNkk Sauwn noMnuz Sbu sidliwe ngesikhathi ithimba le-Anti-Corruption Task Team lishaqa impahla yakulo mndeni ngenhloso yokuthi kuhlangane imali ebngu-R140 million okukholakala ukuthi yenziwa abakwaMpisane ngopkungemthetho. Isithombe: PURI DEVJEE
UBUNGAFUNGA ukuthi yisembukisweni wezimoto ngesikhathi kudliiwa ezezimpunyela zakwaMpisane eLalucia eThekwini izolo njengoba bekuphuma kulandelana ezohlobo eluphambili zodwa.